Ihe Automma Aka Azụmaahịa nke Ndị Ahịa, Ndị Ahịa, na Ndị Isi (Ndụmọdụ Ndụmọdụ) | Martech Zone
Ahịa akpaaka ejirila nnukwu ụlọ ọrụ kemgbe ọ dị ndụ. Ihe omume a mere akara ya na teknụzụ ahịa n'ọtụtụ ụzọ. Ngwọta mbu emere (ma otutu ka di) siri ike, nwe ọgaranya, ma nwekwaa mgbagwoju anya ma dịkwa oke ọnụ. Ihe ndị a niile mere ka ọ siere obere ụlọ ọrụ ike itinye akpaaka ahịa. Ọbụlagodi na obere azụmaahịa nwere ike ị nweta sọftụwia akụrụngwa azụmaahịa ha na-esiri ha ike ị nweta uru dị na ya.
Omume a wutere m n'ihi na obere ụlọ ọrụ na-enweghị obere ego nwere ike irite uru site na iji akpaaka ahịa. Veragba ụgwọ akpaaka nwere ike ime ka arụpụta ọrụ na nsonaazụ ego site na ọtụtụ. O bu ihe nwute, otutu udiri ihe ndi ozo di ugbu a adighi emezi maka obere ulo oru.
Yabụ, dị ka onye na-ere ahịa na ụlọ ọrụ ahịa SaaS na-ere ahịa email, ọ dị m ka ọ bụ ọrụ m ịchọpụta ihe ndị ahịa nwere oge siri ike. Emere m nke ahụ site n’inyocha ihe karịrị ndị ọkachamara 130 na-arụ ọrụ n’ahịa.
Ma ọ dị m ka nke ahụ ezughị. Achọrọ m ịkekọrịta nghọta na data niile a ka m wee mee roundup isiokwu wee dee ihe epic 55-peeji nke akụkọ jupụtara data ka m kọọrọ ụwa m. Isiokwu a gosipụtara ụfọdụ isi nchọta na data nke akụkọ ahụ. Na mgbakwunye, ejirila aka m họrọ ndụmọdụ kacha mma maka ịre ahịa azụmaahịa nke ndị ọkachamara nyere m oge nyocha m.
Download Akụkọ zuru ezu
Ahịa Akpaaka Aka Akpa Akụkọ
Ka anyị kwuo ntakịrị gbasara nkesa nha ụlọ ọrụ, ọnọdụ nke ndị zaghachirinụ na ụlọ ọrụ ha na-arụ ọrụ. Nke a ga-etinye data niile na-abịanụ n'ime gburugburu.
Nha ụlọ ọrụ - Na nyocha m, 90% nke ndị zaghachiri sitere na ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ 50 ma ọ bụ obere. Nke a pụtara na a na-anọchite anya azụmaahịa pere mpe na obere. Ka anyi gbarie nke a obere. Ihe kariri ọkara nke ndị zaghachirinụ (57%) na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ 2-10. Otu ụzọ n'ụzọ ise (20%) nke azịza sitere n'aka ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ 11-50. Ntinye 17 (13%) sitere na solopreneurs.
Ọnọdụ - Ntinye ntinye kachasị (38%) sitere na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ n'Ọkwa dị ka Marketing na Ahịa. 31% nke ndị zaghachiri na nyocha anyị bụ ndị nwe ụlọ ahịa. Otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị sonyere (25%) bụ ndị isi ụlọ ọrụ. Ndị otu a na - ewere 94% nke ntinye.
Ọrụ - The nkesa ọrụ n'etiti ndị zaghachirinụ ịdabere kwupụta Marketing, na 47%. Nke a bụ ebumnuche ka anyị na-anakọta data ka ihe dị ka ọkara nke ndị zaghachirinụ ga-esi na ụlọ ọrụ ahịa. Industrylọ ọrụ mmepe Software bịara nke abụọ na nyocha ahụ, na 25% nke ntinye sitere na ụlọ ọrụ a.
Ihe niile data a na-atọ ụtọ dị mma, mana ị bịara ebe a iji gụọ banyere nsogbu ịma aka akpaaka, ọ bụghị gị? Ya mere, ka anyị rute ya!
Isi Ahịa Akụrụngwa Azụmaahịa
Na nyocha anyị, 85% nke ndị zaghachirinụ na-eji ụfọdụ ụdị akpaaka ahịa.
Ihe ịma aka kachasị ndị mmadụ na-eche ihu na akpaaka ahịa na -emepụta akpaaka dị mma, yana 16% nke ndị zaghachirinụ na-akpọ ya
Dabere na data anyị, njikọta (14%) bụ nsogbu ọzọ siri ike ndị ọrụ na-eche ihu na teknụzụ akpaaka ahịa.
Ahịa akpaaka chọrọ ọtụtụ ọdịnaya. Ka a sịkwa ihe mere na imepụta ọdịnaya bịara n'ọnọdụ nke atọ, yana 10%.
Njikọ aka (8%) bụ nnukwu nsogbu ọzọ ma nwee njikọ chiri anya na ọdịnaya. Akpaghị aka chọrọ ọdịnaya kacha elu iji kwado njikọ aka.
Ekewapụtara nkewa, njikwa data na njikarịcha site na 6% nke ndị sonyere dị ka ihe ịma aka akpaaka ahịa.
Toolschọta ngwaọrụ (5%), ịhazi mmadụ (5%), nyocha isi (5%), nyocha (4%), ịkọ akụkọ (3%), na nnyefe (1%) bụ ndị ụfọdụ ndị ọkachamara nyochara. .
Na-abịa, anyị ga-eleba anya n’otú nsogbu ndị a si dị iche n’etiti ọnọdụ abụọ: Uto (Ahịa & Ọrịre) na ndị isi ụlọ ọrụ.
Nsogbu Mgbasa Azụmaahịa nke Ndị Mmadụ na Ọnọdụ Uto
Ndị ọkachamara na ndị na-azụ ahịa ahịa na ndị ahịa na-ekwukarị bụ na-ekepụta akpaaka (29%), site na oke dị elu
Njikọ ọnụ bụ ihe ịma aka ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ na ọnọdụ uto na-eche ihu na akpaaka ahịa, yana 21% nke ndị zaghachirinụ na-egosi ya.
Mepụta ọdịnaya bịara na nke atọ na 17% nke ndị ọkachamara na-eto eto na-ekwu ya.
13% nke ndị zaghachirinụ sitere na ọnọdụ uto.
E gosipụtara njikwa data na idu ndú dị ka ihe ịma aka site na 10% nke ndị sonyere.
Nsogbu ndị ọzọ a na-ekwukarị na-agụnye: nhazi onwe (6%), njikarịcha (6%), njikọ aka (4%), ịchọta ngwaọrụ (4%), nchịkọta (4%), na ịkọ akụkọ (2%).
Nsogbu Azụmaahịa Ahịa nke ndị isi
Ihe mgbagwoju anya nke ahia ahia bu ihe mbu nye ndi isi, ya na 21% nke ndi ozo n’onodu a
Na obere na obere ụlọ ọrụ, ọ na-abụkarị onye isi na-ekpebi ụdị ngwanrọ nke ụlọ ọrụ na-eji. Yabụ, ọ bụghị ihe ijuanya na njikọta (17%) na ịchọta ngwaọrụ (14%) bụ nnukwu nsogbu nye ha.
E gosipụtara ntinye aka na mgbasa ozi akpaaka dịka ihe ịma aka site na 14% nke ndị isi.
Creatmepụta akpaaka (10%) ka ndị isi ụlọ ọrụ kwuru karịa nke ndị ọkachamara na-eto eto na ndị nwe azụmaahịa. Ihe kpatara nke a bụ na ọtụtụ ndị isi anaghị arụ ọrụ na -emepụta akpaaka.
Nchịkọta data na njikarịcha bụ 10% nke ndị zaghachiri na ọrụ CEO.
Fọdụ n'ime nsogbu ndị a na-ekwukarị na ndị isi na-ekepụta ọdịnaya, nhazi onwe, nkewa, mkpesa na nyocha, nke ọ bụla pụtara na 7% nke azịza.
Ndụmọdụ Akpaaka Azụmaahịa sitere na Ndị Ọkachamara na Ndị Ọkachamara
Dị ka m kwuru, anyị jụrụ ndị ọrụ akpaaka ahịa
“Gịnị ka ị ga-agwa onye malitere iji akpaaka arụ ọrụ? Kedu ihe ọ kwesịrị ilebara anya? ”.
Ahọrọ m ụfọdụ azịza kacha mma, ị nwere ike ịgụ nhota niile na gburugburu a.
SaaS guru na Onye guzobere SaaS Mantra, Sampath S na-ekwu mgbe ọ na-abịa ịzụ ahịa akpaaka na ndị mbido kwesịrị ilekwasị anya:
Ryan Bonnici, CMO nke G2Crowd kesara ụfọdụ ndụmọdụ ahịa dị egwu kwesịrị ị shoulda ntị na mbido:
Onye guzobere Ghacklabs, Luke Fitzpatrick gosipụtara mkpa ọ dị mmadụ na-emetụ n'ahịa akpaaka:
Nix Eniego, Onye isi ahia na Sprout Solutions na-adụ ndị mbido azụmaahịa azụmaahịa na-adụ ọdụ ka ha lekwasị anya na mkpụrụ osisi dị ala na ịmepụta usoro zuru ezu tupu ha abanye n'ime nitty-gritty
Ka anyi cheghachite nsogbu ndi isi. N'ihe banyere ndị na-ere ahịa akpaaka na-eto eto n'ọkwa, nnukwu nsogbu ha bụ:
N'aka nke ọzọ, ndị isi ọrụ na-arụ ọrụ na ngwa ahịa na-esiri ike:
Tags: na-eke akpaaka ahiaakụrụngwa ahịaahia nsogbu nsogbu akpaakaMgbanwe ahịa akpaaka ahịaahia akpaaka ọdịnayaahia akpaaka ihe okikeahia akpaaka integrationsahia akpaaka nyiweahia akpaaka ngwaọrụ
Why Keyword ranking ekwesịghị ịbụ gị Primary Performance Metric